Nylon tariby tie
Wenzhou Weihang Plastika Co., Ltd. dia matihanina amin'ny nylon anjara amin'ny fehin-kibo, Stainless vy tie, karavato lovia tie, Bead karazana, isao ny fantsona, ny sodina, film, fastener, fantsika rakitsary, hery lafiny roa jiro, mandeha ho azy roa sosona famindrana fahefana jiro vokatra R & D, famokarana ary ny varotra ao amin'ny iray amin'ireo orinasa. Ary hametraka ny lavitra ezaka fiaraha-miasa fifandraisana milamina amin'ny mpaninjara maro sy ny mpiasa. Ny orinasa lehibe manana milina koronosy tsindrona, fonosana milina, famokarana nandroso ny teknolojia, fitaovana fitiliana, hery matanjaka ara-teknika, dia vokatra naondrana any Eoropa, Etazonia, ny Afovoany Atsinanana sy ny hafa firenena sy ny faritra.
Ny orinasa specializes amin'ny famokarana ny nylon kasety fandidiana hafanana: -20 degre Celsius ny +80 Deg C (nylon 66). Ny mitohy fanatsarana ny fitaovana dia ho afaka hanao nylon andilany -40 mari-pana ambany. Miaraka amin'ny asidra, alkali, lelafo retardant, mateza, insulation sy ny tombontsoa hafa. Products no be mpampiasa ao amin'ny anatiny elektronika orinasa, bundling TV, solosaina câble, jiro, tariby karavato tsipika, koa azo ampiasaina ho an'ny anatiny ravaka, saha mamatotra, sambo câble anatiny fixation, bisikileta na ny fiara fonosana bundling zavatra hafa azo ampiasaina koa ho fambolena, horticulture, asa tanana ary nafatotra ho amboarany zavatra hafa. Ny vokatra manana ny toetra mampiavaka ny fifadian-kanina mamatotra, insulation tsara, tena Fanidiana, mora ampiasaina sy ny sisa. Lasa be dia be ny orinasa, orinasa mba hividy vokatra toy izany koa ny safidy, fa be dia be koa ny toeram-pivarotana lehibe hiditra ny United States sy ny firenena mandroso hafa.
Companies manaraka ny "amin'izao tontolo izao, ary ny mpanjifa fandresena-fandreseny" raharaham-barotra filozofia, foana manaraka ny "lanjan'ny ny orinasa ny tsara toetra, avo fahombiazana sy iva vola" ny mpanjifa mieritreritra manerana ny, ary nitolona mafy hanitatra an-toerana sy iraisam-pirenena tsena, dia nametraka varotra harato sy mpanjifa fanompoana rafitra ao amin'ny firenena, tanàna, vokatra no aondrana any Azia Atsimo-atsinanana, Eoropa sy Etazonia ny firenena hafa sy ny faritra, ny tsena anjara sy ny varotra tahan'ny fitomboana mbola hitsangana hatrany, amim-pitiavana handray vao na ny ela mpanjifa ao an-trano sy any ivelany tonga mitsidika sy hifampiraharaha raharaham-barotra, mba hanangana hoavy tsara kokoa!
Adiresy: Yueqing City, Liushi Ao Ao Industrial Zone